မောင်နှမအရင်းလိုချစ်ခင်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူပိုပိုရဲ့မွေးနေ့အတွက် အလှူအတန်းများ ပြုလုပ်ပေးရင်း သူမရဲ့အကြောင်းတွေကို ၀မ်းနည်းစွာနဲ့ပြောပြလာတဲ့ ဟိန်းသစ် – Cele Posts
ဂီတ လောကမှာ ပရိသတ် အခိုင်အမာ ကိုယ်စီ ရရှိထားတဲ့ ဟိဏ်းသစ်နဲ့ ပိုပို ကတော့ အချစ်ရဆုံး သူငယ်ချင်းတွေဆိုတာ သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။ အရင်ထဲက သီချင်းတွေလည်း အတူတူလုပ် ခဲ့ကြသလို ပွဲတွေ အလှူတွေဆိုရင်လည်း စိတ်တူကိုယ်တူ တက်ရောက် လျက်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဟိဏ်းသစ်က သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ပိုပိုရဲ့ မွေးနေ့လေးအတွက် အလှူအတန်းများပြုလုပ်ပေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း ခံထားရတဲ့ ပိုပိုအတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ကာ ယူကြုံးမရဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်း ကိုလည်း ခုလိုရေးသားဖော်ပြလာပါတယ်။ ” သူနဲ့စသိခဲ့တာ ကျနော့်ပထမဆုံးအခွေ၊ သူ့ပထမဆုံးအခွေ စည်ပင်ကြော်ငြာဘုတ်အတွက် စည်ပင်ရုံးမှာ ကိုယ်တိုင်စာရွက်လေးတွေကိုင်ပြီး လူကြီးကိုမတ်တပ်ရပ်စောင့်ရတဲ့အချိန်မှာပေါ့။
သူလည်း နိုင်ငံကျော် မဟုတ်သေးဘူး။ ကျနော်လည်း ဘာမှမဟုတ်သေးဘူး။ နှစ်ယောက်သား မျက်စိသူငယ်နား သူငယ်နဲ့ စည်ပင်လူကြီးက မရောက်သေးလို့၊ ထမင်းစားနားလို့၊ tea time မို့လို့ဆိုပြီး ခွင့်ပြုကြောင်းလက်မှတ် မထိုးပေးချိန်မှာ အပြင်မှာထိုင်စရာမရှိ မတ်တပ်ရပ်စောင့်ရတဲ့အချိန်။ ကျနော်တို့ ၂ ယောက်လုံးက ကိုယ်တိုင်စာရွက်လေးတွေကိုင်ပြီး လက်မှတ်ထိုးရတာပေါ့။ အဲ့ချိန်စကားတွေပြော၊ ရင်တွင်းဖြစ်တွေပြောရင်း ရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်။
နောက်ပိုင်း ပရိုမိုးရှင်းပွဲ တခုကအပြန် သူကပွဲ လာတော့ ဝတ်စား စားထားတာပေါ့။ ပြန်မယ်လုပ်တော့ သူ့မှာကားကလည်း မရှိ၊ taxi ကလည်းမစီးနိုင်၊ သူ bus ကားနဲ့ပြန်မယ်ပြောတော့ ကျနော်က မလုပ်ပါနဲ့ ကျနော်လိုက်ပို့မယ်ဆိုပြီး လိုက်ပို့ပြီး ရင်းနှီးမှုတွေပိုရခဲ့ပါတယ်။၂ယောက်စလုံးက စသိထဲက အရင်ထဲကသိတဲ့လူရင်းတွေလို၊ ပွင့်လင်းရင်းနှီးပြီး စိတ်ရှင်းရှင်းနဲ့ပေါင်းခဲ့တယ်။ တယောက်နဲ့တယောက် သာတယ် နာတယ်မရှိပဲ ကူညီဖေးမခဲ့တယ်။သူငယ်ချင်းတွေအပေါ် သူမှာရှိတာအကုန်စား၊ သူမှာရှိတာယူ၊ လိုအပ်တာမငြီးမညူ ကူညီပြီး အရမ်းကောင်းခဲ့တဲ့သူ။ မရှိဆင်းရဲသားနဲ့ အဖိုးအဖွားတွေတွေ့ရင် သူ့မှာရှိသမျှ ဟင်းဖိုး ဆွမ်းလောင်းဖိုးအတွက်ကလွဲရင် အကုန်လှူ၊ မရှိရင် ချေးငှားပြီးလှူတဲ့ထိ အလှူအတန်းရက်ရောတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းပါ။
နှစ်တိုင်းနီးပါးတူတူ ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ သူ့မွေးနေ့မှာ ဒီနှစ်သူနဲ့တူတူ မဖြတ်သန်းရဘူး။ သူ ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာ အလှူအတန်းတွေ မလုပ်နိုင်ဘူး။ သူအဆင်ပြေရဲ့လား??သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အနေနဲ့ စိတ်အတော်မကောင်းဘူး။ ယူကြုံးမရဖြစ်တယ်။ ဝမ်းနည်းတယ်။ သူ့အတွက် သူ့အစား ဒီနှစ်မွေးနေ့မှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကို ဆွမ်းနဲ့သစ်သီးတွေ လှူဒါန်းပေးခဲ့တယ်။ သူ ပြန်လာရင် ဘယ်လောက်သတိရကြောင်းပြောရမယ် ခုလှူဒါန်းတဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့် အဆင်ပြေအေးချမ်းပါစေ။ နေကောင်းကျန်းမာပါစေ။ အမြန်ပြန်လာပါစေ။ ပြည်သူများလည်း ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးပါစေ “လိုရေးသားဖော်ပြထားရာ ပရိသတ်ကြီး အတွက် ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မောငျနှမအရငျးလိုခဈြခငျရတဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈသူပိုပိုရဲ့မှေးနအေ့တှကျ အလှူအတနျးမြား ပွုလုပျပေးရငျး သူမရဲ့အကွောငျးတှကေို ဝမျးနညျးစှာနဲ့ပွောပွလာတဲ့ ဟိနျးသဈ
ဂီတ လောကမှာ ပရိသတျ အခိုငျအမာ ကိုယျစီ ရရှိထားတဲ့ ဟိဏျးသဈနဲ့ ပိုပို ကတော့ အခဈြရဆုံး သူငယျခငျြးတှဆေိုတာ သိရှိပွီးဖွဈမှာပါ။ အရငျထဲက သီခငျြးတှလေညျး အတူတူလုပျ ခဲ့ကွသလို ပှဲတှေ အလှူတှဆေိုရငျလညျး စိတျတူကိုယျတူ တကျရောကျ လကျြရှိတာလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ ဟိဏျးသဈက သူငယျခငျြးဖွဈသူ ပိုပိုရဲ့ မှေးနလေ့ေးအတှကျ အလှူအတနျးမြားပွုလုပျပေးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဖမျးဆီးထိနျးသိမျး ခံထားရတဲ့ ပိုပိုအတှကျ စိတျမကောငျးဖွဈကာ ယူကွုံးမရဖွဈရတဲ့ အကွောငျး ကိုလညျး ခုလိုရေးသားဖျောပွလာပါတယျ။ ” သူနဲ့စသိခဲ့တာ ကနြေျာ့ပထမဆုံးအခှေ၊ သူ့ပထမဆုံးအခှေ စညျပငျကွျောငွာဘုတျအတှကျ စညျပငျရုံးမှာ ကိုယျတိုငျစာရှကျလေးတှကေိုငျပွီး လူကွီးကိုမတျတပျရပျစောငျ့ရတဲ့အခြိနျမှာပေါ့။
သူလညျး နိုငျငံကြျော မဟုတျသေးဘူး။ ကနြျောလညျး ဘာမှမဟုတျသေးဘူး။ နှဈယောကျသား မကျြစိသူငယျနား သူငယျနဲ့ စညျပငျလူကွီးက မရောကျသေးလို့၊ ထမငျးစားနားလို့၊ tea time မို့လို့ဆိုပွီး ခှငျ့ပွုကွောငျးလကျမှတျ မထိုးပေးခြိနျမှာ အပွငျမှာထိုငျစရာမရှိ မတျတပျရပျစောငျ့ရတဲ့အခြိနျ။ ကနြျောတို့ ၂ ယောကျလုံးက ကိုယျတိုငျစာရှကျလေးတှကေိုငျပွီး လကျမှတျထိုးရတာပေါ့။ အဲ့ခြိနျစကားတှပွေော၊ ရငျတှငျးဖွဈတှပွေောရငျး ရငျးနှီးခဲ့ကွတယျ။
နောကျပိုငျး ပရိုမိုးရှငျးပှဲ တခုကအပွနျ သူကပှဲ လာတော့ ဝတျစား စားထားတာပေါ့။ ပွနျမယျလုပျတော့ သူ့မှာကားကလညျး မရှိ၊ taxi ကလညျးမစီးနိုငျ၊ သူ bus ကားနဲ့ပွနျမယျပွောတော့ ကနြျောက မလုပျပါနဲ့ ကနြျောလိုကျပို့မယျဆိုပွီး လိုကျပို့ပွီး ရငျးနှီးမှုတှပေိုရခဲ့ပါတယျ။၂ယောကျစလုံးက စသိထဲက အရငျထဲကသိတဲ့လူရငျးတှလေို၊ ပှငျ့လငျးရငျးနှီးပွီး စိတျရှငျးရှငျးနဲ့ပေါငျးခဲ့တယျ။ တယောကျနဲ့တယောကျ သာတယျ နာတယျမရှိပဲ ကူညီဖေးမခဲ့တယျ။သူငယျခငျြးတှအေပျေါ သူမှာရှိတာအကုနျစား၊ သူမှာရှိတာယူ၊ လိုအပျတာမငွီးမညူ ကူညီပွီး အရမျးကောငျးခဲ့တဲ့သူ။ မရှိဆငျးရဲသားနဲ့ အဖိုးအဖှားတှတှေရေ့ငျ သူ့မှာရှိသမြှ ဟငျးဖိုး ဆှမျးလောငျးဖိုးအတှကျကလှဲရငျ အကုနျလှူ၊ မရှိရငျ ခြေးငှားပွီးလှူတဲ့ထိ အလှူအတနျးရကျရောတဲ့ ကနြေျာ့သူငယျခငျြးပါ။
နှဈတိုငျးနီးပါးတူတူ ဖွတျသနျးခဲ့တဲ့ သူ့မှေးနမှေ့ာ ဒီနှဈသူနဲ့တူတူ မဖွတျသနျးရဘူး။ သူ ဒီနှဈမှေးနမှေ့ာ အလှူအတနျးတှေ မလုပျနိုငျဘူး။ သူအဆငျပွရေဲ့လား??သူငယျခငျြးတဈယောကျအနနေဲ့ စိတျအတျောမကောငျးဘူး။ ယူကွုံးမရဖွဈတယျ။ ဝမျးနညျးတယျ။ သူ့အတှကျ သူ့အစား ဒီနှဈမှေးနမှေ့ာ ဘုနျးကွီးကြောငျးကို ဆှမျးနဲ့သဈသီးတှေ လှူဒါနျးပေးခဲ့တယျ။ သူ ပွနျလာရငျ ဘယျလောကျသတိရကွောငျးပွောရမယျ ခုလှူဒါနျးတဲ့ ကောငျးမှုကုသိုလျကွောငျ့ အဆငျပွအေေးခမျြးပါစေ။ နကေောငျးကနျြးမာပါစေ။ အမွနျပွနျလာပါစေ။ ပွညျသူမြားလညျး ဘေးအန်တရာယျကငျးဝေးပါစေ “လိုရေးသားဖျောပွထားရာ ပရိသတျကွီး အတှကျ ပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။